यो विवाह संलग्नता छल्ले लगाउन सम्भव छ? दुलही लागि विवाह संकेत
संलग्नता घन्टी - धेरै मान्छे को लागि अर्थ जो विश्वास, आशा र प्रेम विवाह प्रतीक। यो आभूषण विवाहको दिन मात्र हुन्छ। तर, केही जोडे विवाह अघि तिनीहरूलाई लगाउन थाल्छन्। यो सही हो? लोक omens के? यो विवाह संलग्नता छल्ले लगाउन सम्भव छ? तपाईंका अधैर्य अन्त्य?
विवाह छल्ले बारेमा कथा
सबैलाई कुनै शुरुवात र छल्ले संग सर्कल बारेमा थाह छ। केही मानिसहरू यस विवाहको लागि सही विशेषता छ भन्ने विश्वास गर्छन्। हाम्रा पुर्खाहरूले विवाह मानव जन्म अघि स्वर्गमा मस्यौदा तैयार छ, र कुनै एक जहाँ सुरुमा थाह बताए। धेरै जोडे विनिमय छल्ले गर्दा अनन्त जीवन विश्वास।
प्राचीन समयमा, भविष्यमा पति र पत्नी उपहार साटासाट। एक गेटर रूपमा पति darilsya Knuckles। पति एक लुगा सिउदा लगाउने औठि एक Mistress रूपमा आफ्नो पत्नी दिनुभयो। समय, उपहारहरू फरक प्रकारको भएका छन्। पति आफ्नो हात र उहाँले विभिन्न जडीबुटीबाट wove जो आफ्नो पत्नी कंगन, को खुट्टा मा राखे।
अर्को चरणमा घन्टी देखियो। पतिले स्त्रीलाई राखेँ। सबैलाई अब त्यो एक निश्चित मानिसको पर्छ भनेर थाह थियो। उहाँले रक्षा र प्रिय हेरविचार गर्नुपर्छ जसले उनको मास्टर थियो।
पहिले मात्र एक महिला घन्टी लगाएका। को XX सताब्दी को शुरुवात मा आभूषण र मानिसहरू लगाउन थाले। अहिले र जारी सम्म त। विवाह घन्टी - विश्वास र प्रेमको प्रतीक। लक्षण र संसारको विश्वास यी विभिन्न आभूषण बारेमा जानुहोस्।
सामान्यतया विवाह छल्ले जोडे सराहना। आखिर, लगभग सबैलाई एक चमत्कार मा विश्वास गर्दछन्। केही कारणले, धेरै अधिक महंगा र धनी सजावट, राम्रो देखिन्छ भन्ने विश्वास गर्छन्। तथापि, विशेषज्ञहरु अन्यथा दाबी गर्छन्। पछि सबै, कुनै कुरा धेरै आफ्नो घन्टी, जो उसलाई मा पत्थर, मुख्य कुरा कसरी - भावना र मनोवृत्ति।
समय, जोडी छोराछोरीलाई वा नातिनातिनी गर्न आभूषण दिनेछु। अन्त मा, यो विवाह छल्ले छन् कि बाहिर जान्छ परिवार पुरखेउली। विशेष गरी आफ्नो मालिक खुसीसाथ विवाह भने।
लामो समय पहिले मान्छे एक केटी घन्टी दिन्छ जब विवाह, अघि एक मनोरंजक समारोह थियो। यो परम्परा संलग्नता भनिन्छ।
त्यो दिन देखि दुलही विवाह अघि घन्टी पहनता। केही मानिसहरूलाई संलग्नता दिन एक सजावट पहनता गर्ने केटी, एक सम्बन्धमा गम्भीर हुन उनको मङ्गेतर प्रतिज्ञा र जडान अवरोध छैन छ भन्ने विश्वास गर्छन्। यो यस्तो छल्ले बायाँ हात मा पहना पर्छ भनेर विश्वास छ।
संलग्नता आवश्यक एक सुन घन्टी किन्न छैन। तपाईं चाँदी वा तामा गर्न सक्नुहुन्छ। क्रममा धेरै जवानहरूले संलग्नता दिन र विवाह दुवै मा विवाह छल्ले किन्न बचत गर्न। पहिलो, तिनीहरूले आफ्नो बायाँ हात मा एउटा सजावट छन्, त्यसपछि दायाँ लुकाएको थियो। तर, धेरै मान्छे omens विश्वास र अक्सर आश्चर्य: यो विवाह वेयर विवाह छल्ले गर्न सम्भव छ? यस्तो indiscretions पछि नराम्ररी भविष्यमा असर गर्न सक्छ।
परम्परा गरेर, मा विवाह जोडी साटासाट विवाह छल्ले को दर्ता को दिन। तिनीहरूले अर्थ विश्वसनीयता, प्रेम, र एउटा उज्यालो भविष्यको लागि आशा। आफ्नो आनन्द बारेमा विश्व बताउन उद्देश्य संग coveted घन्टी लगाउन प्रयास विवाह अघि बालिका धेरै।
धेरै मात्र समारोह को सजावट लागि थकित पर्छ भनेर परम्परा पालन। त्यसैले संकेत विचार छैन। बस परम्परा लीन।
किन विवाह विवाह छल्ले छैन लगाउने सक्नुहुन्छ
यी गहने एक सर्कल मा निष्ठा र इन्टर्लेसिङ प्रतीक। तिनीहरूले एक महिला वा पुरुष साझेदार आवश्यकता छैन भनेर वरिपरि घन्टी लगाउने अनुसार। यो अझै पनि आधिकारिक विवाह छैन, विवाह घन्टी छैन थकित गर्नुपर्छ।
के तपाईं साँच्चै अहिले चाहनुहुन्छ भने एउटा सुन्दर सजावट लगाउने छ? धेरै जोडे पनि यो प्रश्न विचार छैन। तिनीहरूले बस घन्टी र वेयरमा राखे।
पहिले विवाह हटाइएको थियो, र विवाह परम्परा को दिन साझेदारी। धेरै बालिका भनेर गलत हो लाग्छ। तिनीहरूले लोक अन्धविश्वास र विश्वास सुन्न। केही गलत जान्छ भने, विवाह सौतेली गर्न हुनेछ, भनेर बुझ्न, एक निश्चित Omen मा फेरि आफैलाई क्षमा र विश्वास छैन।
यो विवाह संलग्नता छल्ले लगाउन सम्भव छ? लोक omens अंतर रहन्थ्यो। प्रत्येक आफ्नै जान्छ। तर, यो तिनीहरूलाई सुन्न मनमोहक छ।
नियम, हाम्रा पुर्खाहरूले धेरै आफ्नै अनुभवबाट विश्वास बताए। पूर्व-विवाह तयारी अफवाहहरु र अन्धविश्वासको भरिएका छन्। तपाईं विवाह विवाह छल्ले लगाउन अघि सम्भव छ कि छैन भनेर जान्न चाहन्छु भने, विश्वास ध्यान। तिनीहरूले भाग्य भविष्यवाणी छैन, तर केवल निर्णय गर्न धक्का।
तपाईं विवाह अघि घन्टी लगाउने भने, तपाईँले पुरानो दासी रहन सक्छ।
उनको औंला मा अरू कसैको आभूषण लगाउने - पर्याप्त समस्या।
आफ्नो दाहिने हात मा एउटा चाँदीको औंठी लगाउने - वित्तीय समस्या संग।
चाँडै आफ्नो प्यारो संग जानेबेलामा आउन - आफ्नो घन्टी प्रेमिकाहरुलाई छैन दिनुपर्छ।
कुनै एक धारण र लाउने हटाउन गर्नुपर्छ। यो एउटा द्रुत छोडपत्र छ।
विवाह अघि छल्ले को हानि - यस दुलहा वा दुलही छिटो अलग।
हामी मात्र विवाह छल्ले बारेमा विश्वास जांच गरेका छन्। संकेत राम्रो केहि छैन भन्छन्। मात्र अलग, प्रकोप, छोडपत्र।
तर, धेरै नवविवाहितहरूका omens विश्वास छैन, बाँच्न खुसीसाथ कहिल्यै पछि। तिनीहरूले कम तपाईं पुरानो पत्नीहरू 'कथा ध्यान गर्न आवश्यक छ भन्ने विश्वास गर्छन्। तपाईं साथ प्रत्येक अन्य संग राम्रो तरिकाले प्राप्त गर्नुभयो भने, सबै भन्दा राम्रो विश्वास र आफ्नो महत्वपूर्ण अन्य भरोसा त्यसपछि, तपाईँले कुनै पनि संकेत प्रभावित हुनेछ। विवाह अघि सबै वेयर छल्ले छैन। तर, यो एक निजी कुरा हो।
जब तपाईं विवाह छल्ले लगाउने सक्नुहुन्छ?
विवाह विशेषताहरु मात्र विवाह दिनमा थकित। तपाईं अझै पनि omens विश्वास भने, न्यू जर्सी पहिले यसको अभिप्रेत उद्देश्य परिवार प्रतीक लागि प्रयोग गर्न आवश्यक छ। तपाईं देख्न, तपाईं विवाह स्थगित गर्न वा अप्रत्याशित कुरा भने, तपाईं आफूलाई लापरवाही को आरोप। भाग्य लोभ्याउन छैन: प्रयास गर्नुहोस्।
सबै आफ्नो समय छ। चाँडै तपाईं अरूलाई वैवाहिक आनन्द को एक प्रतीक घमन्ड गर्न सक्षम हुनेछ। तपाईं omens विश्वास छैन भने, त्यसपछि लगाउने स्वतन्त्र महसुस। आखिर, धेरै मानिसहरू खुसीको कुरा कहिल्यै पछि संकेत र विश्वास गर्न सुनिरहेको बाँचिरहेका छौं।
विवाह - थप एक अवसर आफूलाई घण्टी गर्न। एक चर्च वा मन्दिरमा - मात्र फरक संलग्नता छल्ले विवाह, रजिस्ट्रीमा कार्यालय धारण विवाह र विवाह गर्न लगाउँथे भन्ने सक्छ। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ रूपमा, प्रत्येक घन्टी विशिष्ट समय र विशिष्ट स्थानमा पहना छ। पहिले वेयर नगर्न गर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
के तपाईं साँच्चै चाहनुहुन्छ भने
तपाईं omens विश्वास गर्छन्? तपाईं खुसीसाथ कहिल्यै पछि बाँच्न चाहनुहुन्छ? तथापि, तपाईं धेरै विवाह धारण गर्न चाहनुहुन्छ हुनेछ आफ्नो औंला मा घन्टी विवाह अघि? त्यहाँ एउटा मात्र बाटो बाहिर छ। आफ्नो साझेदार संग कुरा। आखिर, तपाईं संलग्नता मा आभूषण खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। जबकि विवाह नहीं, घन्टी सजिलै थकित र डर केही गर्न सकिन्छ।
तपाईं कसरी धारण गर्न चाहनुहुन्छ छैन को घन्टी औंला आफ्नो अधिकार jewel हात, यो के गर्नु हुँदैन। दाहिने वेयरमा विवाह गर्न रिङ खराब छ। आखिर, तिनीहरू मात्र विवाहित महिला लगाउने। अझै पनि रोगी र उनको बायाँ हात मा घन्टी लगाएका हुन छ। निस्सन्देह, omens र भाग्य angering डर विश्वास गर्नेहरूलाई मात्र।
यसलाई आफ्नो भावना र भावना नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ। के तपाईं साँच्चै चाहनुहुन्छ, तर तपाईं एक विवाह संलग्नता बज्न लगाउन डराउँछन् भने पनि, तपाईं त overpower। तपाईं चाँडै विवाह गर्न छौँ के मा ट्युन गर्न प्रयास गर्नुहोस्। यहाँ त तपाईं आनन्दित र आफ्नो सफलताको र उपलब्धिहरू को घमण्ड गर्न सक्षम हुनेछ।
त्यहाँ धेरै अन्धविश्वास हो। तिनीहरूले विवाह छल्ले र चश्मा दुवै चासोको विषय। त्यहाँ तिनीहरूलाई को धेरै वर्ष को लागि परीक्षण गरिएको छ किनभने यो पनि संकेत सुन्न आवश्यक छ कि एक राय छ। मान्छे भङ्ग यदि भन्न विवाह चश्मा, भाग्यवस यो। विशेष गरी क्रिस्टल को गरे।
नियम, त्यहाँ दुई चश्मा हो, र तिनीहरूले दम्पतीले घर को आनन्द मा भण्डारण गरिन्छन्। तथापि, गल्ति एक भङ्ग भने, तपाईं तोड्न, त्यहाँ समस्या हुन नत्र आवश्यकता हो, र दोस्रो।
खराब भाग्य, अन्य पिउने आफ्नो चश्मा भने। पनि मित्र तिनीहरूलाई स्पर्श गर्नु आवश्यक छैन। यो विवाह चश्मा पहिलो विवाह वार्षिकोत्सव भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ भनेर तर्क। यो साइन दम्पतीलाई संकट र परिवीक्षाधीन पारित गरेको छ कि, त्यसैले तिनीहरू आनन्द तर केही हुन जारी भन्छन्।
विवाह पोशाक बारेमा पनि संकेत छ। तपाईंले तिनीहरूलाई सुन्न भने, त्यसपछि यसलाई यो लिन भाडामा सकिन्छ कि गर्दछ। वास्तवमा, पौराणिक कथा अनुसार, तपाईं अरू कसैको विवाह पोशाक लगाउने भने, दुर्भाग्यपूर्ण हुन।
मिथक वा वास्तविकता?
हामी किन अघि विवाह विवाह छल्ले लगाउने सक्दैन बाहिर समझ। लक्षण र विश्वास दिन प्रत्येक व्यक्ति आराम गर्छन्। विशेष गरी यो महिला आउँछ। तिनीहरूले पनि थाह छैन, फरक विश्वास सुन्न पनि मिथक छ वा वास्तविकता।
वास्तवमा, मनोवैज्ञानिक अनुसार, यसलाई मान्छे विश्वास ठ्याक्कै गर्दछ। को संकेत कि यदि तपाईंलाई लाग्छ कि - एक मिथक छ, त्यसपछि तपाईं निश्चित प्रभावित छैन। तर, दृढ तिनीहरूलाई विश्वास बालिका छन्। तिनीहरूले केहि सुन्न भने आवश्यक, समस्या आउँछ भन्ने लाग्छ। त्यसपछि यी बालिका र त्यहाँ विभिन्न समस्याहरूको छन्।
मानिसको अचेतन मनमा - ठूलो शक्ति। यसलाई नकारात्मक र सकारात्मक दुवै आकर्षित गर्छ। त्यसैले त तपाईं, लामो खुसी बाँच्न र एकल एकाइ हुन, चाहनुहुन्छ भने नै मात्र सकारात्मक भावना समायोजन गर्नुहोस्। यो तपाईं सम्म छ र आफ्नो भविष्य निर्भर गर्दछ।
दुलही लागि विवाह संकेत अंतर रहन्थ्यो। तिनीहरूले मात्र समस्या को कुरा, तर पनि आनन्द छैन। कसरी यो एक अविवाहित केटीले हात माझ्छिन् र हेम भिजेको भने, पति रक्सी पिउने हो भनेर विश्वास गर्न सम्भव छ? वा अनिद्रा केटी हेडस्ट्रोंग बच्चा भन्छन्? त्यसैले सबै पवित्र संकेत विश्वास छैन। पक्कै वास्तविक विश्वास छन्, तर ती वास्तवमा धेरै केहि। यहाँ तिनीहरूलाई छ, र कहिले काँही यो सुन्न आवश्यक छ।
अब तपाईं यो विवाह संलग्नता छल्ले लगाउन सम्भव छ कि छैन भनेर थाहा छ। यसलाई स्पष्ट भए: प्रत्येक व्यक्ति उहाँले फिट समझे के आफूलाई लागि छनोट। धेरै Slavs भन्छन्: वैवाहिक समारोह चलिरहेको बेला घन्टी ड्रप छैन। यस्तो समस्या सामना छन् जो जोडे, तिनीहरूले कहिल्यै पछि खुसीसाथ बाँच्न किनभने यो एक मिथक छ कि तर्क।
को संकेत र परम्परा भ्रममा छैन। आखिर, दुई फरक कुरा हुन्। प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो भाग्य निर्धारण गर्छ। सम्झना! केवल एक व्यक्ति खुसी, आफूलाई विश्वास गर्ने हुनेछ। सबै संकेत ध्यान छैन। मात्र सकारात्मक भावना, आनन्दित र हाँस्न भन्दा, र तपाईं सफलता तपाईंको घरमा दस्तक कसरी नोटिस छैन थप आकर्षित गर्छ।
मनपर्ने तपाईं एउटा प्रस्ताव गर्न तयार छ भन्ने कसरी थाहा छ?
विवाह प्रस्ताव कसरी बनाउने मा केही सुझावहरू
एक विवाह को लागि हास्य लटरी: कसरी बाहिर गर्दा र
आफ्नै हात को प्रकृति मा विवाह: साइट चयन, निर्माण पाल सजावट विकल्पहरू
त्यसैले कसरी भूमि घरेलू "tasters" सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि
Brunettes लागि रातो लिपस्टिक - छेउमा एक दृश्य। रातो लिपस्टिक कसरी चयन गर्ने?
सामन र पनीर curd संग Tarts। यस नुस्खा लागि धेरै विकल्प
भोजनालय को स्टाइलिश डिजाइन, बैठक को कोठा संग संयुक्त
संसारको नेताहरूले तपाईंले भ्रमण गर्न सक्ने 10 सरकारी निवास
सुरक्षाको लागि पेशागत सुरक्षा निर्देशन। श्रम सुरक्षा निर्देशन को विकास
आफ्नो वकील: इमानदारी र परिचय मामिलामा निष्ठा।